Yiziphi abadayisi iziphi izinhlobo zako ezisemqoka kanye namafomu?
Ibhizinisi, Ibhizinisi International
Ukuthuthukiswa iyiphi umnotho yesimanje kunzima ukucabanga ngaphandle nalomsebenzi ubudlelwane bayo namanye amazwe. Kusukela ngo-1991, i-Russia, yalile esinakho isimo ukuhwebelana namanye amazwe, okusho ukuthi manje konke inkampani bayasazi yini namanye amazwe. Namuhla, njalo inkampani unelungelo bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla ezweni izimpahla kanye namasevisi, futhi isimo ayisekho izenzo njengenhlangano phakathi kwabo kanye abalingani angaphandle.
Asizwise lokhu ukuthi onjalo abahwebi. Lona umsebenzi wangaphandle kwezomnotho yanoma iyiphi inkampani noma ibhizinisi, okuyinto sphere ahlukene yomsebenzi wakhe, singakwazi ukuhlakulela ubuhlobo obuseduze eziphethe imakethe yomhlaba wonke. Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho Fea, udlulela umqondo eziyinkimbinkimbi - WPP. ubudlelwane kwezomnotho Foreign kukhona iqoqo zonke uhlobano phakathi izinhlangano ibhizinisi kazwelonke angaphandle lokho okushodayo ekudleni ngaleso sikhathi. Ngaphezu kwalokho ekucaciseni indaba yokuthi ngaphandle abadayisi ababi Wec, sicabanga ukuthi ERI ezinjalo. ubudlelwane kwezomnotho International - wuhlelo ubudlelwane kwezomnotho phakathi uthi, okungase ukuzibonakalisa ezihlukahlukene. Kufanele kuqashelwe ukuthi umqondo yokugcina njengoba isikhathi futhi yakhula kakhulu, ngakho ukuqonda ngaphandle kolwazi odlule kunzima kakhulu.
Fea ngezigaba kuhilela ukwabiwa izinhlobo ezahlukene kanye namafomu nokuxhumana phakathi umhlali kanye non-ohlala ezweni elinikeziwe. Zezomnotho kukhona izinhlobo ezinhlanu eziyinhloko yomsebenzi wezomnotho angaphandle: ukuhwebelana kwamazwe omhlaba, ukukhiqizwa ngamazwe, nokubambisana zesayensi kanye lobuchwepheshe kanye nokutshalwa kwezimali, kanye credit ngamazwe kanye nobudlelwane yemali. Phakathi kwazo ngazinye amafomu ngenhla ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana izinhlobo eziningi namanye amazwe.
Ngokwesibonelo, ukubambisana kwamazwe omhlaba kwezesayensi nakwezobuchwepheshe sehlukaniswe zinhlobo ezifana ukudayiswa patent namalayisense ku empahla; zokucwaninga ngokubambisana emkhakheni isayensi nobuchwepheshe; franchising; ukuhlinzeka Consulting ubunjiniyela amasevisi; izinhlobo ezahlukene usizo lwezobuchwepheshe. Izimali kanye nobudlelwane credit Mezhuyev izakhamuzi nonresidents yezwe ibonisa akunika nomunye ukubolekisa nokubonga, enifeza izibalo emakethe international, ukudayiswa izibopho, ukwabelana, okunye, futhi-ke, uhlobo lwemali. Ukubambisana international plan utshalomali kuhilela ukutshalwa nomthetho futhi ngaphandle ilungelo iqhaza ekuphathweni, eqashisa ngamafulethi nokudalwa ezenziwa nge izinhlangano angaphandle. Ngokuphathelene ukuhweba, yonke into ilula - ukuthekelisa, ukungenisa, nangezinkolelo-ze ezihlukahlukene esiphikisayo izivumelwano, kuhlanganise enana, owasetshenziswa izizwe zasendulo.
Abahwebi - iqoqo abantu zomthetho futhi zemvelo ukuthi bafeze imisebenzi namanye amazwe at intando ngokuhambisana nomthetho wezwe. Bayakuba bashintshisane imikhiqizo izimpahla zabo zomqondo, izimpahla kukhiqizwa futhi izinkonzo.
Yokuthekelisa: ukuthi kuyini, futhi kulokho Amapharamitha sibangelwa?
New komhlaba laboratory iyokwakhiwa eChile
Usomabhizinisi owaziwayo nomdlali umsebenzi e Logistics - Gabriel Karaarslan
Isakhiwo ukukhiqizwa ibhizinisi
"Regidron" ne ukuhlanza futhi ubuthi
Umtholampilo Wezingane "Medsi" ngesikhathi Annunciation Lane - phambili ngezibuyekezo nezithombe
Angikwazi ukungena ku "contact". Yini okumelwe uyenze?
Impahla CSS "obala" - indlela elula ukwenza nesayithi design ezithakazelisayo
Motifs Yemvelo. Cross Thunga ihhashi
Ukugunda iziqu bob-bob e medium, izinwele ezinde futhi okufutshane: Photo
Kuyini okudayisa: Inani, izici isimo samanje